Izay navalin'ny vahoaka (Neh. 8:9-12)
Nitsangana ny vahoaka rehefa nanokatra ny Tenin'Andriamanitra, dia ny Torah hebreo i Ezra. Nisaotra an'Andriamanitra izy mialoha ny namakiany izany. Rehefa avy namaky izy, dia niray feo ny olona namaly hoe: "Amena, Amena" - Neh. 8:5,6, ary nanandra-tanana. Dia niondrika izy ireo sady niankohoka tamin'ny tany.
Vakio ny Neh. 8:9-12. Nahoana ireo mpitarika no niteny tamin'ny olona mba tsy halahelo na hitomany?
"Toy izany koa, tamin'ny taona taty aoriana, rehefa novakina tamin'ny babo niverina avy tany Babilôna ny lalan'Andriamanitra, ka nitomany ny vahoaka noho ny fandikan-dalema nataony, dia nolazaina ny teny feno fitiavana manao hoe: "Aza malahelo .....Mandehana, hano ny matavy, ary sotroy ny mamy, dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra; fa masina ho an'ny Tompontsika ity andro ity; koa aza malahelo hianareo, fa ny fifaliana avy amin'i Jehôvah no fiarovana mafy ho anareo" - Neh. 8:9,10." TMF, t. 182.
Rehefa nihaino ny tenin'Andriamanitra ireo vahoaka dia tohina ny fony noho ny fahatsapany ny fahotany, ka nanomboka nitomany. Rehefa miseho amintsika Andriamanitra dia manomboka takatsika ny fitiavany sy ny fahatsarany ary ny famindrampony sy ny fahatokiany, ary tsapantsika koa ny fahalementsika sy ny fahadisoantsika, ary takatsika fa tsy afaka ny hamonjy ny tenantsika isika. Manampy antsika hahita ny fahamasinan'Andriamanitra ny Baiboly, ary rehefa hitantsika izany dia ho hitantsika fa maharikoriko ny fahotantsika. Izany no antony nitomanian'ireo olona tao Jerosalema. Tsy tian'Andriamanitra anefa ny alahelovany ka nanambara izao teny izao taminy i Nehemia sy i Ezra ary ireo Levita: "aza malahelo hianareo, fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo" - Neh. 8:10. Eny tokoa, tsy nahomby izy ireo tamin'ny lases, kanefa azony atao ny rnitoky amin'ny herin'Andriamanitra mba hamonjy azy sy hanova azy ho olom-baovao.
Tamin'ny andro fitsofana trômpetra no namakian'i Ezra ny andro masina izany, izay itsofana ny trompetra. Izany no mampahatsiahy ny olona ho vonona ho amin'ny andro izay hitsaran'i Jehôvah ny olony, izay hitranga afaka hafoloana. Mila manomana ny fony ny vahoaka, ary izany indrindra no antony itomaniany. Nilaza taminy anefa ny mpitarika azy ireo fa ren'Andriamanitra ny fitomaniany, koa fotoana tokony hifaliany amin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izao.
lnona no ambaran'izany amintsika mikasika ny faharatsian'ny fahotana ka nahatonga ny fanomboana an'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana ho hany vahaolana ho an'ny fahotana sy fanantenana ho antsika?